ဆံပင်တွေရှည်ထွက်လာတဲ့ အရုပ်မလေး - JAPO Japanese News
ဟူး 16 Oct 2019, 10:59 မနက်
ဂျပန်မှာတော့ ဆံပင်တွေရှည်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ လူရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံတမ်းစကားတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးက ဒီမိန်းကလေးရုပ်ပါ။
ဒီဓာတ်ပုံက နည်းပညာနဲ့ပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ဘဲ တကယ့်အရုပ်ကို ရိုက်ထားတာပါ။
ဒီအရုပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒဏ္ဍာရီကို အရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
နှစ်ပေါင်း 80 မတိုင်မီက ဂျပန်နိုင်ငံမှာပေါ့….
လျင်မြန်စွာနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ စစ်တပ်အင်အားကို ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် ထပ်မံအင်အားတိုးချဲ့နေတဲ့ ခေတ်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အသက်3နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့သမီးလေးကို လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် ဟိုကိုင်းဒိုးဒေသ စပ်ပိုရော့မြို့ကနေ အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်ကို ၀ယ်လာခဲ့ပေးပါတယ်။
အရုပ်ကလေးရလိုက်တော့ သမီးလေးဟာ အရမ်းကိုပျော်ရွှင်၀မ်းသာသွားပြီး နှစ်သက်စွာနဲ့ အမြဲအတူတူဆော့ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းရှာတဲ့ ကလေးမလေးဟာ အရုပ်ကလေးရပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရောဂါတစ်ခုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးဟာ ချစ်ရတဲ့သမီးငယ်လေးနဲ့အတူ သူမအရမ်းကြိုက်တဲ့ လူရုပ်လေးကိုပါ သမီးလေးနဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့ စဥ်းစားထားကြပေမယ့် ၀မ်းနည်းပူဆွေးစွာ ငိုကြွေးရင်းနဲ့ ထည့်သွင်းမြုပ်နှံဖို့ကို မေ့သွားကြပါတော့တယ်။ မတတ်သာတဲ့အဆုံးမှာတော့ သူတို့ဟာ အဲဒီအရုပ်လေးကို ဘုရားခန်းက ဆွမ်းကပ်တဲ့စားပွဲပေါ်မှာ သမီးလေးရဲ့ ကမ္ပည်းတိုင်အဖြစ် ထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကာလအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကို သူတို့သတိထားမိလာကြပါတယ်။
“အလိုလေး ဘုရားသခင် ! ခပ်တိုတိုညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံက အခု ပုခုံးအထိရှည်နေပါရောလား”
သူတို့သမီးလေးရဲ့ ၀ိဥာဥ်က ဒီအရုပ်မှာစွဲကပ်နေတယ်လို့ လူပြောများလာတဲ့အတွက် ကတ်ပြားတစ်ခုမှာ သမီးလေးရဲ့ နာမည်ရေးပြီး ဘုရားကျောင်းမှာ သွားလှူလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီအထိကတော့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ပြီး လူရုပ်ကိုလည်း ဘုရားကျောင်းမှာ အခုချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဆံပင်တွေကလည်း ဆက်လက်ရှည်ထွက်နေတုန်းပါပဲ။
ဒါဆိုရင် ဆံပင်က ဘာလို့ရှည်ထွက်နေရတာလဲ???
အရင်ဆုံး ပထမတစ်ချက်ကို ရှင်းပြရရင် …
အဲဒီအရုပ်မလေးမှာ တကယ့်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆံပင်ကို အသုံးပြုထားတယ်
လူရဲ့ဦးရေပြားဆဲလ်တွေက မသေဆုံးသေးတဲ့အချိန် ဆံပင်ကိုကပ်ထားတဲ့ကော်မှာ ပါ၀င်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးက အားဖြည့်ထောက်ပံ့ပေးသလိုဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်ရှည်ထွက်လာတယ် ဆိုတာ သဘာ၀ကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပုခုံးအထိတောင်ရှည်ထွက်လာတယ် ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းပြရခက်သားလားပဲ။
အပူချိန်နဲ့ စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပါ
ဒါကိုတော့ နေ့စဥ်နေထိုင်မှုထဲမှာပဲ အားလုံးလည်း ကြုံတွေ့ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
မိုးရွာတဲ့နေ့နဲ့ နေသာတဲ့နေ့တွေမှာ ဆံသားချောမွေ့တာ ကြမ်းတမ်းတာ မတူဘူးဆိုတာမျိုး ကြုံဖူးကြမလားမသိဘူးနော်။ ဒီလိုဆိုလည်း ဘယ်လောက်ထိတောင် ဆက်ပြီးရှည်နေမှာပါလိမ့်။
အရုပ်မလေးရဲ့ ဆံပင်က ဆံပင်အရှည်ကြီးကို နှစ်ပိုင်းခေါက်ပြီး ခေါင်းမှာတွဲချုပ်ထားတာ
ဒီတော့ တစ်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်ရင် ဆွဲတဲ့ဘက်ကရှည်လာမှာပေါ့တဲ့။ ဒါကနားလည်ရအလွယ်ဆုံးကိစ္စပေမယ့် ဒီလိုဆို ဆံပင်က တစ်ဖက်တို တစ်ဖက်ရှည်နဲ့ မညီမညာတွေ ဖြစ်နေမှာပေ့ါ။ အခု ဓာတ်ပုံထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ဆံပင်က နှစ်ဖက်လုံးအရှည်အတူတူပဲနော်။
သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပေါင်းပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတာ လို့လည်းပြောကြတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ထူးဆန်းတယ်ပြောပြော ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင် ဆက်တွေးစရာ မရှိတော့ပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျကျလက်တွေ့စစ်ဆေးဖို့ လာရောက်တောင်းဆိုသူတွေရှိပေမယ့် ဘုရားကျောင်းက တာ၀န်ရှိသူတွေ ငြင်းပယ်ကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ရိုးရိုးသာမန်အတိုင်း ကမ္ပည်းတိုင်တစ်ခုအဖြစ် ထားတာပါဆိုရင် အငြင်းပွားစရာ မရှိဘူးပေါ့နော်။
ကြောက်တော့ကြောက်တာပေ့ါ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား
လူရုပ်တွေမှာ ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတွေ၊ လူသား၀ိဥာဥ်တွေ ကိန်းအောင်းနေတတ်တယ် လို့ပြောကြတယ်လေ။ အမေရိကရုပ်ရှင်တွေမှာဆို အသတ်ခံရတဲ့ လူရဲ့၀ိဥာဥ်၀င်ပူးထားတဲ့ လူရုပ်က လူလိုက်သတ်တာတို့၊ သွေးကြွေးပြန်ဆပ်ရမယ်ဆိုတာတို့ပေ့ါ။
သာမန်လူရုပ်မဟုတ်ပဲ ဒီလိုထူးဆန်းနေရခြင်း အကြောင်းရင်းကို အားလုံးပြတ်ပြတ်သားသားသိရဖို့အတွက် သုတေသနဆန်းစစ်မှုလုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမှာပဲနော်။
အသဲကွဲတာကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ ?